24 Zvisinei, vakafumoenda kuguva racho, pazuva rokutanga revhiki, vakatakura zvinonhuhwirira zvavakanga vagadzirira.+ 2 Asi vakawana dombo rakungurutswa kubva paguva,+ 3 uye pavakapinda havana kuwana mutumbi waShe Jesu.+ 4 Vachiri kuvhiringidzika pamusoro peizvi, tarira! varume vaviri vakanga vakapfeka zvipfeko zvaipenya vakamira pedyo navo.+ 5 Sezvo vakadzi vacho vakatya, vakaramba vakatarira pasi, varume vacho vakati kwavari: “Muri kutsvakirei Munhu mupenyu pakati pevakafa? 6 [[Haasi pano, asi amutswa.]]+ Yeukai kutaura kwaakaita kwamuri achiri muGarireya,+ 7 achiti Mwanakomana womunhu anofanira kuiswa mumaoko evanhu vanotadza, orovererwa asi ozomuka pazuva rechitatu.”+ 8 Naizvozvo vakayeuka mashoko ake,+ 9 vakadzoka vachibva kuguva, vakaudza vane gumi nomumwe chete nevamwe vose zvinhu zvose izvi.+ 10 Ivo vaiva, Mariya uya anonzi Magadharini, naJoana,+ naMariya amai vaJakobho. Uyewo, vamwe vakadzi vose+ vavaiva navo vakanga vachiudza vaapostora zvinhu izvi. 11 Zvisinei, mashoko aya akaita seoupenzi kwavari uye havana kutenda+ vakadzi vacho. 12 [[Asi Petro akasimuka, akamhanya kuguva, uye, paakadongorera, akaona machira aakanga akamonerwa nawo chete. Naizvozvo akaenda, achishamisika mumwoyo make pane zvakanga zvaitika.]] 13 Asi, tarira! pazuva iroro chairo vaviri vavo vakanga vachienda kune mumwe musha waiva mamaira anenge manomwe kubva muJerusarema uye wainzi Emausi, 14 uye vakanga vachikurukurirana zvinhu zvose izvozvi+ zvakanga zvaitika. 15 Zvino pavaikurukurirana nokutaurirana, Jesu akasvika,+ akatanga kufamba navo; 16 asi maziso avo akadzikatidzwa kuti varege kumuziva.+ 17 Iye akati kwavari: “Inyaya dzipi idzi dzamuri kukurukurirana muchifamba?” Zvino vakamira nezviso zvakasuruvara. 18 Achipindura, mumwe ainzi Kreopasi akati kwaari: “Ndiwe woga uri kugara muJerusarema somutorwa zvokuti hauzivi zvinhu zvakaitika mariri mazuva ano here?” 19 Iye akati kwavari: “Zvinhu zvipi?” Ivo vakati kwaari: “Zvinhu zvine chokuita naJesu wokuNazareta,+ akava muprofita+ ane simba mubasa nomushoko pamberi paMwari nevanhu vose; 20 uye kuti vapristi vedu vakuru nevatongi vakamutongera rufu, vakamuroverera.+ 21 Asi taitarisira kuti munhu uyu ndiye aifanira kununura Israeri;+ chokwadi, uye kunze kwezvinhu izvi zvose, rino ratova zuva rechitatu kubva zvinhu izvi zvaitika. 22 Zvakare, vamwe vakadzi+ vanobva kwatiri vatikatyamadzawo, nokuti vafumira kuguva 23 asi havana kuwana mutumbi wake uye vauya vachiti vaonawo kuratidzwa kwengirozi kunoshamisa kwazvo, idzo dzati mupenyu. 24 Uyezve, vamwe vatinavo vaenda kuguva;+ uye vawana zvakaita saizvozvo, sezvanga zvataurwa nevakadzi vacho, asi havana kumuona.” 25 Naizvozvo akati kwavari: “Haiwa imi mapenzi uye vane mwoyo inononoka kutenda zvinhu zvose zvakataurwa nevaprofita!+ 26 Zvakanga zvisina kukodzera here kuti Kristu atambure+ zvinhu izvi uye kuti apinde mukubwinya kwake?”+ 27 Zvino achitangira pane Zvakanyorwa naMosesi+ nezvose Zvakanyorwa nevaprofita,+ akavadudzira zvinhu zvaiva nechokuita naye muMagwaro ose. 28 Pakupedzisira vakasvika pedyo nomusha wavaienda, uye iye akaita seaipfuurira mberi. 29 Asi vakamumanikidza, vachiti: “Garai nesu, nokuti kwatosviba hwatova usiku.” Naizvozvo akapinda kuti anogara navo. 30 Zvino zvaakanga akatsenhama navo pazvokudya, akatora chingwa, akaonga, akachimedura, akatanga kuvapa.+ 31 Maziso avo akasvinudzwa kwazvo, vakamuziva; uye iye akabva anyangarika kwavari.+ 32 Zvino vakati kune mumwe nomumwe: “Mwoyo yedu yanga isingatsvi here zvaanga achitaura nesu mumugwagwa, zvaanga achitivhurira kwazvo Magwaro?” 33 Zvino paawa iyoyo chaiyo vakasimuka, vakadzokera kuJerusarema, vakawana vane gumi nomumwe chete nevaya vavaiva navo vakaungana, 34 vachiti: “Chokwadi Ishe amutswa uye azviratidza kuna Simoni!”+ 35 Zvino ivo vakarondedzera zvakanga zvaitika mumugwagwa uye kuti vazomuziva sei nokumedura chingwa.+ 36 Vachiri kutaura zvinhu izvi iye akamira pakati pavo [[akati kwavari: “Rugare ngaruve nemi.”]] 37 Asi nokuti vakanga vavhunduka,+ uye nokuti vakanga vachitya, vakanga vachifunga kuti vaona dzangaradzimu. 38 Naizvozvo akati kwavari: “Munonetsekerei, uye nei mwoyo yenyu isina chokwadi nazvo? 39 Onai maoko angu netsoka dzangu, ndini chaiye; ndibatei+ muone, nokuti mudzimu hauna nyama nemapfupa+ sezvamunoona zvandiinazvo.” 40 [[Paaitaura izvi akavaratidza maoko ake netsoka dzake.]] 41 Asi vachigere kutenda+ nokuda kwokufara kukuru uye vachiri kushamisika, iye akati kwavari: “Mune chimwe chinhu chokudya pano here?”+ 42 Zvino vakamugamuchidza nhindi yehove yakagochwa;+ 43 uye akaitora, akaidya+ ivo vachizviona. 44 Zvino akati kwavari: “Aya ndiwo mashoko angu andakakutaurirai pandakanga ndichiri nemi,+ kuti zvinhu zvose zvakanyorwa mumutemo waMosesi neZvakanyorwa nevaprofita+ nomuMapisarema+ pamusoro pangu zvinofanira kuzadzika.” 45 Akabva avhura pfungwa dzavo kwazvo kuti vanzwisise zvaireva Magwaro,+ 46 akati kwavari: “Saizvozvo zvakanyorwa kuti Kristu aizotambura omuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu,+ 47 uye rupfidzo rwokukanganwirwa zvivi+ rwaizoparidzwa muzita rake kumarudzi ose+—kutangira muJerusarema,+ 48 imi munofanira kuva zvapupu+ zvezvinhu izvi. 49 Uye tarirai! ndinokutumirai chiya chakapikirwa naBaba vangu. Asi imi, garai muguta kusvikira mapfeka simba rinobva kumusoro.”+ 50 Asi akaenda navo akasvika kuBhetani, akasimudza maoko ake, akavakomborera.+ 51 Paakanga achivakomborera, akaparadzaniswa navo, akatanga kukwira kudenga.+ 52 Vakamupfugamira, vakadzokera kuJerusarema nomufaro mukuru.+ 53 Uye vakaramba vari mutemberi vachirumbidza Mwari.+